Adiga yaa ku abuuray? Kownka se yaa abuuray? – Kaasho Maanka
Badanaa dadka somaaliyeed inay arkaan qof soomaliyeed oo aan Alle rumaysnayn waxay ku noqotaa mucjiso iyo qaadanwaa, si ay qofkaa ay u arkaan inuu caqligii ka tegay ugu caqli-ceshaan, su’aalaha ay arkaan inaanu qofka Alle diida ka jawaabi karin waxaa kamida; Adiga yaa ku abuuray? Kownka se yaa abuuray?
Labadan su’aalood waa sababta dad badan oo Soomaliyeed Alle u rumaysan yihiin waayo waxaa loogu sheegay inuu Alle kownka u abuuray iyaga dartood, iyagana u abuuray inay isaga caabudaan! Cajab.
Hadaba ma runbaa inay su’aashani laf dhuun gashay ku tahay Alle koodyada.
Waa marka koowaade adigaagan su’aasha keenay moodayana inaad jawaabta hayso sow ma ogid inaan waxaagu sheegasho dhaafsiisnayn. Maxaadse caddayn u haysaa inuu Alle aniga i abuuray oo aan ka ahayn in Quraanka lagu sheegay, Quraanka hadddii aanan rumaysnayn ooaan u arko inuu yahay hadallo dad hore oo la dhoodhoobay sidee ayuu caddayn iigu noqon karaa?
Sow ma ogid in Aadanaha adduunka ku nool qolo waliba ay leedahay (Creation Myth) ama sheeko xariireed abuurka kownka iyo noolaha ku saabsan, inta la ogyahay waxa la arkay hal qabiil oo reer Amazonian ah oo la dhaho (Piraha) oon lahayn wax sheeko xariir abuureed ah.
Sheeko xariiro abuureedka Masaaridii hore
Sheeko xariir abuureedyada Aadanaha qaarkood waa kuwo yaab badan waxaana ka mida sheeko xariir abuureedka (hymn) ee ay rumaysnaayeen masaaridii hore waxayna u taal sidan.
Wax walba waxay ka bilaabmaan abuure loo yaqaan (Atum) kaas oo aan waxba ka horrayn isaguna is abuuray, kadib Atum wuxuu dareemay oo is tusay inuu wax kale abuuro dabeedna intuu siigaystay -Biyaha gacanta isaga keenay- ayuu manidii afka ku shubtay kadibna hindhisay dabaysha, waxaanu afka kasoo daayey roobka, labadaasna waxaa ka abuurmay nolosha.
Sheekooyinka qaarbaa ah inuu Atum u galmooday hadhkiisa balse mid kay tahayba waxay u muuqataa wax aan caqli gal ahayn lagana yaq-yaqsoodo waaba hadduu jiro eebbe siigaystaa.
QORMO LA XIRIIRTA: Af-Soomaaliga
Haddii ay sheekooyinkaasi wax lala yaabo iyo qosol kula yihiin waa hubaal in sheekada Quraanka ku qoranna ay dad badan ula muuqato wax lagu qoslo iyo yaab.
Ujeedada aanay dadku badanaa u malayn karin abuure la’aan waxaa kamida qaabka iyo quruxda nolosha ka muuqata oo u eg mid aan si madax bannaan isu samayn karin waana su’aasha in badan dadka soomaliyeed ee fajacay ku hadaaqaan “Oo immika ma waxaad i leedahay adduunkan iyo adigaagan saan u egiba waan iska samaysanay?”.
Intii ka danbaysay daabicii buuggii Darwin ee (Origin of species) waxa jirta aragti saynis ahaan hadda aanu wax muran ahi ku jirin (Theory of Evolution) oo ugu yaraan sharraxi karta nolosha dhulka dushiisa iyo kala duwanaansheheeda, waana aragti cilmiya oo tiirar culus ku dhisan walow aanay weli ka jawaabi karin halka uu ka yimi unuggii ugu horreeyay ee is koobiyayn karay hadana waxay si qurux badan oo la fahmi karo u sharaxdaa nolosha dhulka guudkiisa ka jirta iyo kala duwanaanshaheeda. Laga yaabee sida uu ku doodo Richard Dawkins kownku waxuu sugayaa Darwinkiisii (The cosmos is still waiting it’s own darwin). Inay maruun dhacdo inuu dhacdo in Aadanahu fahmo halka uu kawnkani ka yimi.
Ugu danbayn anigu ma ogi cid i abuurtay balse waxaan ogahay in hooyaday i dhashay,
hooyadayna hooyadeed dhashay, silsiladaa Ayaydeey ka baxdayna ay tahay mid waayo badan isa soo daba taxnayd, oo mar uun aan isku hooyo nahay aniga iyo Daanyeerku!! ‘Haa daanyeerka’, sidoo kale waxaan ogahay in libaaxa iyo dacawadu aanay tol durugsan ahayn, dhurwaagana aanu diddib iska soo galo, waxaan rumaysnahay in dhammaan nolosha adduunku bah-wadaag tahay.
Aragti kasta oo Aadnaha cidla taagtaa waa miduu isagu samaytay oo kibirkiisa iyo isla waynidiisana laga dhex arki karo halka aragtida Aadanaha la midaysa Abuurka iyo noolayaasha kale xaqqa u dhowdhay haba la yaabee.
Abuur Atum Masar Piraha
Shaki ayaa iiga jiro diinta iyo islaamka waa ku xirahay qoraaladiina waana fikir xora oo loihahanyahay iyo aqoon.
Reply to Muharak
Aad iyo Aad bay Aragtidaadu u yar tahay Waxana Tahay qof maankiisa wixii la rabo lagu shuban karo
Sxb maxaa dhacay sidee shaki kaaga jiri karaa
marka horeba wxd u baahnayd qof maskaxda kula maamula
runtii waad ku mahadsan tihiin qormooyinka ka hadlaya nolosha iyo diinta.
waad aragti gaaban tihiin hadad atheist tihiin sababto ah abuurku waxu leyahay hal abure iyo asaase hadadan garanayn asaasa inaa dafirta wa aragti yaraan lkin xorba utihiin aragtidina in la idinku colaadiyana ma istahishan mahad wax iskleh eebe abuuray koonka waa ilahayga wana deeqle naxariis badan wax kali ah ooon ogahay wa inta raalibana kahay goor iyo ayaan
Hadaad ramaYsataY aragtida darwin ee odhanaysa dadku daanYeerbaY ka imaaden
DaanYerku halku ka imid ?
IYama fudud dunidani waY iska abuurantaY iYo
Cidbaa abuur ?
[ As-Sajda – 7 ]
Eebaa wanaajiyey abuuridda wax kasta, wuxuuna ka billaabay abuuridda Dadka Dhoobo, (Nabigii Aadam ahaa)
Reply to Ciise
Waar niyow dunidan illahay baa sameeyay lkn illahay in lacaabudo waxba ugama baahna nabi maxamedna waxan ku nacay siduu adumaha ukala badali jiray maanta hadii uu joogi lahaa waaba laxidhi lahaa
Haaa dalmarow sidee udhihikartaa ma aqaani unuhaas halka uu kayimi
Sabab maxey tahay
Sideebu unug isaga sameysmi karaa hadeysan jirin awood sameysay
Sideese igu suurta gali kartaa in malayin sano uu marba heer somaro iyada oo aysan jirin awood kawarqabta oo marba heer galineysa nagadaa niyow qir in ay jirto awooda abuuritanka
Wax kasta oo ay tahayba
dad mulxidiin ah ayaa qora maqaaladan , sidan laguma jabin karo muslimiinta
Marka koowaad aad baan usoo dhowaynayaa aragtida qoraaga ee xorta ah.marka labaad anigu idiin cadayn maayo xaqiiqo ku saabsan jiritaanka iyo nolosha.maxa yeelay noloshu waxa ay uleedahay qeexitaan Kala duwan indhaha dadka kala duwan.sidoo kale waxaan aaminsanahay in cid walba oo si xor ah ufakirta kuna baraarugsan qaabka uu adanuhu wax u aamino iyo sababta uu uugu baahan yahay aadanuhu inuu wax aamino.In ay fahmi karto in aanay marnaba ahayn wax qurux badan in loo arko kitaabka qur-aanka oo jira mudo dhan 14ban qarni qoreena shaqsiyaad below aadam ah oo labo lugood kutaagan in uu yahay xaqiiqo katurjumi karta caalam… Akhri faalladan »
Reply to Jerry dickson
Haa hortay yaa damaanad qaadaya inuu quranku hadalkii illahay yahay kaliya wanu rumaynay hadal nin inagoo kale ahi oo waliba saxare kunaala inuu yidhaahdo illahay baan safiir uhay maxay tahay xikmada ku jirtaa allan idinku dhaarshe teedada kale illahay fariintiisa ma cid kaluu kugu soo dhiibi lahaa miyanu qof walba toos ula hadleen anigu waxan macalin ka ahaa school sare kuyaal Dallas USA dadkani mayaqaanan quran iyo xadiisul bukhaari toona lkn dad fiican baa kujira oo kaba wanaagsan kuwa islamka sheeganya kawaran aakhiro marka latago illahay wuxuu ku odhan doona wixii aan islam ahayn illahay ma aqbalo ee gala naarta… Akhri faalladan »
Sheeko Xariirioyinkan Farah batay mid wlaba cadayn ayay u bahan tahy wax cadayn ahna ma hayno matkaas wax bilaa cadayn ah seen u rumaysana ma qqasabaa inan amini wax anan cadayn u hayn xitaa eebena ha noqdee!
Adiga ya ku aburaya walala
Reply to Maxamud said
Muhiim mahaa inuu ogaado cidii abuurtay kii abuuray illahayna cid uu usheegay inuu isagu abuuray majirto kaliya waxaynu rumaynay waraaqo ay qoreen dad miyiga saxaraha kunoola waa hore oo adhi raacato ahaa
🤔🤔, Allow Hana baadiyeyn, kuwa madax adagna hanaga dhigin, cadaabkaada kululna ee aaqiro dadbadan sugaya allow naga ilaali
Sheekooy kunacay ! Cakuye tolkeey doodihii kaluunka dhex mari jiray barisamaadkii ayuu wali is kuhaystaa….Jecliyaa in aad ogaataan bad in aysan ujoojinaynin ruxmadkeeda nololeed maleesiga kaluunka mooday in wax biyaha dul fadhiya ayaa abuurtay muse ma buuran.
Ugu horayn xaqa ilaahay haku tuso waxaase laga yaabaa in ninkan drwinsmka ah kaliya aad hadalkiisa maqashay ma ogtahay in quraanka kariimka ah uu sheegay in koonkan markii ugu horaysay uu ahaa waxyar oo isku dhagan kadibna la kala fujiyay aad baan u nxaa markaan arko dad somali ah oo atheism
Markaad akhrisato Quraanka gaar ahaan bisha Ramadaan waxaad akhriskaa ka dheefeysaa abaalmarin iyo bogaadin laguugu kaydiyo bangiga Illaahay si marka aad dhimato nolosha danbe ay kuugu noqoto dhigaal aad ku badbaado. Akhirska Quraanku wuxuu barayaa qofka muslimka ah Ilaaha weynee abuuray, wuxuu baranayaa inuu yahay nin. Meelo badan baad ku arkeysa ereyga isaga (هو) wuxuuna aad u necebyahay in...
Jiritaanka waynaha maxaa caddayn u ah?